Su'aal: Qalabkan ay xayaysiiyaan ee caloosha lagu xidho?
Topic: Su'aal: Qalabkan ay xayaysiiyaan ee caloosha lagu xidho? (Read 2339 times)
« on: February 17, 2011, 05:23:57 AM »
SA CA WAWaan salamayaa dhakhaatiirta is xilqaantay iyo golahaba,waxaan dhakhaatiirta weydiinayaa qalbkan ay xayaysiiyaanee caloosha lagu xidho ee ay leeyihiin calooshuu ridaa ma la isticmaali karaa oo wax ma ka tari karaa in qofka caloosha weyn uu ka yareeyo caloosha iyo muxuu dhibaato keeni karaa maadaama uu calooshii oo dhan luxayo.
Re: Su'aal: Qalabkan ay xayaysiiyaan ee caloosha lagu xidho?
« Reply #1 on: February 19, 2011, 05:45:24 AM »
Suumanka caloosha ee aad looga xayasiiyo talefeshinnada oo loo isticmaalo buurnida iyo in lagu yareeyo baruurta caloosha ayaa waxay u kala qaybsamaan illaa 4 nooc.1- Nooc loogu talagalay in caloosha lagu celiyo kaliya oo la xirto xilliga jimicsiga kaasoo kaa saacida in miisaan dheeraad ah uu caloosha saaro si cadaadiskaas ay murqaha caloosha ay adeeg u noqdaan.2- Noocaan wuxuu wataa qalab soo saaro kuleel kaasoo heerkulka caloosha sare u qaado taasoo dufanka iyo xaydhta caloosha ay kuulaato qulqulka dhiiggane uu bato taas waxay keensanaysaa in energy badan la gubo oo miisaan saas ku lumo.3- Noocaan waxuu wataa qalab murqaha u dirayo dhanbaal koronto ah kaasoo murqaha in ay aad u gariiraan keena taasoo laga wado in la badiy murqaha caloosha shaqadooda si ay caloosha u yaraato.4- Noocaan waa cusub yahay mid caafimaadka u rooonne maahan wuxuu dhanbaal koronto u dirayaa caloosha iyo xubnaha caloosha ku jirto taasoo fariinta gaajada maskaxda loo diri lahaa joojiyo si qofka badanaaba uu dareemo inuu dharganyahay howshii dheefshiidka calooshane hoos ayuu u dhigayaa maadaama dheecannadii burburin lahaa cunnada soo deyntoodii la yareeyay!.Waxaa la isku raacsanyahay suun la xirto kaliya in aysan calool ku yaraanayn haddii uusan ka mid ahayn program dhameestiran oo miisaanka lagu yaraynayo, waxaa kaloo kugula talin lahaa in aad ka fogaatid suumanka shaqada jirka wax u dhima ama koronto ku sii daaya jirka ama guba unugyada caloosha ama murqahaba.Haddii aad ka fakaraysid caafimaadkaaga inta aadan isticmaalin qalabyadaan cusub oo qaar badan xitaa aan la qoon sida ay u shaqeeyaan in aad kala tashid takhtarkaaga.